Filtrer les éléments par date : dimanche, 05 mai 2019
dimanche, 05 mai 2019 22:18
Kidnapping: Voasambotra i zaman'i Fola, dahalo rain-dahiny
Tao anaty fiara mpitatitra tao Maevatanana i Tsaramiandry Velonaina Mahatombo Fernand, antsoina hoe zaman'i Fola, no tra-tehaka, antsasak’adiny taorian’ny niaingany avy ao Ambondromamy ny sabotsy 4 mey tamin’ny 9ora alina rehefa nahazo vaovao ny Zandary.
Efa aman-taonany no nikarohana an’ity dahalo rain-dahiny mpanao fankàna olona an-keriny sy ny asan-jiolahy ity.
Anisan'ny jiolahy voatonona ho tadiavina tamin'ny fandalovan'ny Praiminisitra tany Ambatoboeny i zaman'i Fola.
Odigasy sy fitaovam-piadiana mahery vaika ary bala maro no tratra teny aminy.
dimanche, 05 mai 2019 22:13
Gadra nitsoaka: Karohina i Naina
Namoahan'ny Polisim-pirenena filazana fikarohana ity gadra nitsoaka ny fonja ity.
dimanche, 05 mai 2019 22:08
Fifidianana depiote: Ireo tarehimarika tsara ho fantatra
Miisa 803 ireo kandida nahafeno fepetra araka ny lisitra navoakan’ny CENI tamin’ny 19 martsa 2019. Toerana miisa 151 no ifaninanana.
Miisa 25 388 ny birao fandatsaham-bato.
Hatreto dia 10 302 194 ireo mpifidy voasoratra anarana anaty lisi-pifidianana. Amin’ny 15 mey no voalazan’ny lalàna fa ikatonan’ny lisi-pifidianana.
10 674 075 ny isan’ny biletà tokana natonta tatsy Afrika Atsimo.
dimanche, 05 mai 2019 22:04
Fifidianana depiote: Kandida iray namoy ny ainy, telo any am-ponja
Hisokatra ny alatsinainy 6 mey 2019, amin’ny enina ora maraina ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana solombavambahoaka.
Telo amin’ireo kandida miisa 803 no tazomina am-ponja vonjimaika amin’izao fotoana izao, noho ny fanenjehana ara-pitsarana mahazo azy ireo, ka kandida ao amin’ny Distrikan’i Fandriana ny iray, any Mandoto ny iray ary any Ambatofinandrahana.
Misy ihany koa ireo kandida nahazo fahafahana vonjimaika, miandry fitsarana.
Namoy ainy tamin’ity herinandro ity ihany koa ny kandida solombavambahoaka iray ao amin’ny Distrikan’i Fenoarivobe.
Tsy mampiova ny zavatra voarakitra ao anaty biletà tokana ireo tranga ireo, araka ny fanazavan’ny filoha lefitry ny CENI, Rakotonarivo Thierry.
dimanche, 05 mai 2019 22:02
Ikalamavony: Kandida depiote mandrahona solontenam-panjakana
Nitsofoka tao amin’ny foiben’ny RNM eto Ikalamavony ilay kandida, ny sabotsy 4 mey 2019 tolakandro, niaraka tamina andian-jatovo be sandry 13 lahy, nitondra taratasy izay nambaran’izy ireo fa “Note de service” manendry olona hafa hisolo toerana ny “Delegen’ny serasera” eto an-toerana.
Tranga izay mampametra-panontaniana hoe : kandida solombavambahoaka ve no iraka hanatanterahana ny fampahafantarana taratasim-panjakana toy izany ?
Nanambara tamin’ny teny feno fandrahonana moa ilay kandida fa avy amin'ny Minisitry ny serasera sy kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy, ilay taratasy teny an-tananan’izy ireo io.
dimanche, 05 mai 2019 19:08
Tolagnaro: Mirongatra ny vaky fasana
Tamin’ity faran’ny herinandro ity izao dia fasana amam-polony tao Ampasy Nahampoana sy Sonierana, Kaominina tsy lavitra ny renivohitry ny Faritra Anôsy no nisy namaky. Taolambalo tamina razana am-polony maro no very tamin’izany.
Mpiarakandro na mpiandry omby no nahita ireo fasana vaky ka nampandre ny Fokonolona.
dimanche, 05 mai 2019 18:25
Foloalindahy: Ho an’ny « Bataillon Inter-Armée » Ihosy ny helikôptera tonga
Nilaza i Andry RAjoelina, filohan’ny Repoblika sady filoha faratampon’ny Foloalindahy fa natolotra amin'ny fomba ofisialy androany tany amin'ny “Bataillon Inter-Armée” Ihosy ny angidimby voalohany ho an’ny foloalindahy.
“Tsy maintsy voaverintsika ny hasin'ny foloalindahy mba ho tena tandroka aron'ny vozona, hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary ho reharehan'ny Malagasy", hoy izy.
dimanche, 05 mai 2019 15:55
Fanodinkodinana volam-baksiny: Senatera, kandida depiote, Tale ara-bola … nidoboka eny Antanimora
Nivoatra ny raharaha mikasika ny fanodinkodinam-bola amina miliara Ariary tamina tsenan'asam-panjakana momba ny vaksiny, vatsian’ny GAVI vola.
Efa teny amin'ny Fampanoavan'ny Pôle anti-corruption (PAC) ny dosie, ary nahazo fahafahana vonjimaika ireo voampanga, saingy narahi-maso ara-pitsarana ary tsy nahazo niala teto Antananarivo.
dimanche, 05 mai 2019 15:54
Hélicoptère de l'Armée Malagasy